९ महिना नबित्दै नेपाल लाइफ छाडे सन्तोष प्रसाईंले
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईले कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएका छन् । कम्पनीको संचालक समितिसँग विवाद परेपछि उनले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएका हुन् । तत्कालीन सीइओ विवेक झाले २ कार्यकाल पूरा गरी संस्था छाडेपछि डेपुटी सीइओको रुपमा कार्यरत प्रसाईंलाई २०७७ माघ २७ गते बसेको...
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सुरक्षित जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलता पश्चात् अझ परिस्कृत रुपमा ‘नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना’ सावधिक जीवन बीमा ल्याएको छ । नेपाल लाइफले ग्राहकको आवश्यकता तथा चाहना अनुसारका बीमा योजनाहरु बजारमा ल्याउने क्रममा यो नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना ल्याएको हो । १८ देखि ७० वर्ष सम्मको...
नेपाल लाइफको सेयर खण्डीकरण निर्णयमा बीमा समितिको रोक, धितोपत्र बोर्डलाई लेख्यो पत्र
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरिसकेको सेयर खण्डीकरण(स्टक स्प्लीट) सम्बन्धी निर्णय लागू नहुने देखिएको छ । नेपाल लाइफको सेयर खण्डीकरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन आउन नदिन नियामक बीमा समिति सक्रिय बनेको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सेयर खण्डीकरण गरी मूल्य बढाउन...
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले MDRT बन्न सफल अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरेको छ । शुक्रबार राजधानीको हायात होलटमा आयोजित एक भब्य समारोहका बीच उक्त सम्मान गरेको हो । विश्वका अभिकर्ताहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्था Million Dollar Round Table (MDRT) 2021 मा सहभागी हुन योग्य आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ...
नेपाल लाइफको चुक्तापूँजी ७.१९ अर्ब पुग्यो, अब विभिन्न शहरहरुमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने
काठमाण्डौ । देशको सबैभन्दा ठूलो बीमा कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दीगो एवम् भरपर्दो लगानीका क्षेत्रहरुमा लगानी विस्तार र विविधिकरण गर्दै जाने भएको छ । यो कम्पनीको माघ २८ गते वीरगञ्जमा सम्पन्न बीसौं वार्षिक साधारणसभाले बीमा समितिको निर्देशनको परिधिभित्र रही सम्पत्ति र दायित्व बीच सन्तुलन कायम गर्न पूँजीगत लगानी वृद्धि...
नेपाल लाइफको सेयर टुक्र्याउने प्रस्ताव पारित, मूल्य बढ्ला ?
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयर टुक्र्याउने(स्टक स्प्लिट) सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको कम्पनीको २० औं वार्षिक साधारणसभाले स्टक स्प्लिट सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो । अब यो प्रस्ताव धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट स्वीकृत भएको खण्डमा नेपाल लाइफको सेयर टुक्र्याउने...
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सेयरधनीको साथमा रहेको सेयर संख्या दोब्बर हुने भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले माघ २८ गते आह्वान गरेको २० आंै वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत हुन लागेको एउटा प्रस्ताव पारित भयो र धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट समेत स्वीकृति आयो भने नेपाल लाइफका लगानीकर्ताको साथमा रहेको सेयर...
नेपाल लाइफद्वारा बम्पर लाभांश प्रस्ताव: बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । सेयर बजारको ब्लु चिप कम्पनीमध्येको एक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ५१ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ। यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि यो लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको आज बसेको ३११ औं संचालक समितिको बैठकले २० प्रतिशत नगद लाभांश र ३१ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । यो...
कोरोनाले छेकेन नेपाल लाइफको गतिलाई, बिमाशुल्क आर्जनमा १९.७८% को फड्को, अन्य सूचक झनै बलियो
काठमाण्डौ । देशकै टप जीवन बिमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्म २७ अर्ब ३४ करोड बढी बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.७८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले २२ अर्ब ८२ करोड बढी बिमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । नेपाल लाइफले कोरोना...
काठमाण्डौ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा साउन १ गतेबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी सन्तोष प्रसाईलाई दिइएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै प्रसाईले कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी पाएका हुन्। गत असार ३१ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रसाईलाई कार्यवाहक सीईओको जिम्मेवारी...
नेपाल लाइफलाई उत्कृष्ट जीवन बिमा कम्पनी बनाएर विदा भए विवेक झा
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा करिब एक दशकको सेवा अवधि सम्पन्न गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) विवेक झाले साउन १ गतेबाट विदा लिने भएका छन् । उनले संचालक समितिसँग भएको सम्झौता बमोजिमको प्रथम कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरी साउन १ गतेबाट नेपाल लाइफबाट विदा लिन लागेका हुन् । नेपाल लाइफको २० वर्षे यात्रामा करिब एक दशक...
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा बिहीबार संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा बिमाको धेरै ठाउँ चर्चा भए पनि जीवन बिमाहरुका लागि भने अपेक्षित बन्न नसकेको नेपालको टप जीवन बिमा कम्पनीका सीइओले बताएका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओ विवेककुमार झाले बिजशालासँग कुरा गर्दै बजेट वक्तव्यको धेरै ठाउँमा बिमाको प्रसंग आए पनि जीवन...
नेपाल लाइफ निरन्तर प्रगति पथमा: बिमा शुल्क २१.२४% ले बढ्यो, जीवन बिमा कोषतर्फ ३४.२३% को छलाङ
काठमाण्डौ । देशकै टप जीवन बिमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्म १८ अर्ब ४१ करोड बिमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिसम्म कम्पनीले १५ अर्ब १९ करोड बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । बिमाशुल्क आर्जनतर्फको यो बढोत्तरीले कम्पनी प्रगति पथमा लम्किरहेको बुझ्न सकिन्छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको...
नेपाल लाइफ २० औं वर्षमा प्रवेश, सीइओ झा भन्छन्–‘रातपछि नयाँ बिहानी आउँछ‘
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड आफ्नो स्थापनाको १९ वर्ष पूरा गरी २० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो कम्पनी वि.स. २०५८ साल वैशाख २१ गते स्थापना भएको थियो । ‘देशले भोगिरहेको यस विषम परिस्थितिको सामना गर्न अग्रमोर्चामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, खाद्यान्यलगायत अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध...